အကောင်းဆုံး မြန်နှုန်းမြင့် Universal Side Sealing Bag စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် မြန်နှုန်းမြင့် Universal Side Sealing Bag စက် စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
မြန်နှုန်းမြင့် Universal Side Sealing Bag စက်
ပုံစံ - SV-HC Series
အီး.P.ဂ.unwinder နှင့်ပေါင်းစပ်ကိရိယာ,၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ထိခိုက်လွယ်ပြီး တည်ငြိမ်သည်။,လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှု.
အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ဖြည်စက်,unwinding speed ကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးသည်။,အမြန်နှုန်း ချိန်ညှိရန် မလိုအပ်ပါ။.(ရွေးချယ်ခွင့်)
တြိဂံခေါက်ကိရိယာ,အလွှာတစ်လွှာမှ ဖလင်ကို နှစ်ဆဖြစ်အောင် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ခေါက်ပါ။.(ရွေးချယ်ခွင့်)
ထပ်နေသော EPC နှင့် တြိဂံခေါက်ကိရိယာကို ရွေးချယ်မှု,လုံခြုံစွာတပ်ဆင်ရန်နေရာယူထားသည်။.
လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ရောနှောအသုံးပြုခြင်း။,စတိုင်မျိုးစုံအိတ်များစွာကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။.
စံချိန်စံညွှန်းများ ဖြစ်ကြသည်။:နှစ်ထပ်နှုတ်ခမ်းခေါက် ကိရိယာ,အောက်ခြေ gusset ကိရိယာ,ဘေးထွက်အဖွင့်ကိရိယာ.(ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးဘက်ဖွင့်ခြင်း။)
အထူး rotary တံဆိပ်ခတ်ဓားဒီဇိုင်း,အလုံပိတ်ဓားကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။,အဆင်ပြေသည်။,မြန်ဆန်လွယ်ကူသည်။.
ပင်မစက်နှင့် ပူးပေါင်းထားသော အထူးအဆုတ်တံခါးပေါက်နှင့် ကြိတ်စက်ကို နှိပ်ပေးခြင်းကြောင့် ပိတ်ဆို့ထားသော ကုန်ချောပစ္စည်းများအတွက် စိတ်မပူပါနှင့်.
ခိုင်ခံ့ပြီး ပေါ့ပါးသော ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဘရိတ်ပါသော ဘီးလူးသည် နေရာကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။.
ရွေးချယ်နိုင်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ:ကိုယ့်ကိုယ်ကို-ကော်ကိရိယာ,punching ယူနစ်,နှစ်ထပ်တံဆိပ်ခတ်ကိရိယာ,block out-အစာကျွေးကိရိယာ.
ရုပ်ရှင်(မီလီမီတာ) ဆာဗိုမော်တာ ပါဝါလိုအပ်သည်။ စက်အရွယ်အစား
အရှည် အကျယ် ထိပ်ခေါက် အောက်ခြေ
SV-800HC 65~760 76~770 75 မီလီမီတာအထိ 65 မီလီမီတာအထိ 30~250 0.01~0.2 2.9kw 7.5KW 4.၆x၁.၅၅x၂.0
SV-1000HC 85~960 4.4kw 9.0KW 4.၆x၁.၇၅x၂.0
SV-1200HC 100~1150 4.4kw 9.7KW 4.၆x၁.၉၅x၂.1
Auto unwinder ပါသော EPC
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/high-speed-universal-side-sealing-bag-machine.html
SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. သည် မြန်နှုန်းမြင့် Universal Side Sealing Bag စက် ကိုအထူးပြုသောပညာရှင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတကာစားသုံးသူများ၏ ၀ ယ်လိုအားနှင့်အညီဒီဇိုင်းသစ်များတီထွင်ရန်အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါသည်။
အကောင်းဆုံး မြန်နှုန်းမြင့် Universal Side Sealing Bag စက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
Slit Seal နှင့် Folder နှင့် EPC Unwinder ပါသောအိတ
Universal Side Sealing Bag စက်